Uncategorized – MM File
သင့်အနာဂတ် ဖူးစာရှင်က ဘယ်မွေးနေ့ နေ့ နံရှင်လဲဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ
သင့်ဘ၀မှာ ဘယ်လို လူမျိုးနဲ့ဘ၀လက်တွဲဖော်ဖြစ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖူးမှာပါနော် …။ အချစ်ရေးဖူးစာဆိုတာ ကြိုတင်ပြောလို့ခန့် မှန်းလို့တော့မရပေမယ့် စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်ကြတာချည်းပါပဲ ..။ သင့်စိတ်ကူးနဲ့ အနာဂတ်က ထပ်တူကျမလား သင်ကြိတ်ကြွေနေသူနဲ့ ထပ်တူကျမလား ဆိုတာ အံ့သြစရာကံကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ ။ သင့်အနာဂတ် ဖူးစာရှင်က ဘယ်မွေးနေ့ နေ့ နံရှင်လဲဆိုတာ […]
သင် ဘယ်သူနဲ့Relationship ချိတ်ခွင့်ရမလဲ ဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ
တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး သက်ဆိုင်ကြောင်း ချစ်သူရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုတဲ့ လူတိုင်း တစ်ခါလောက်တော့ လိုချင်မိကြမှာပါ သင်ကရော သင့်ဘ၀မှာ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အချစ်ရေးကို ဘယ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ခွင့်ရမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စရာပါပဲနော် ။ အဖြေကိုတော့ အောက်က ပုံကို ဖိပြီး ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ ။ […]
စက်တင်ဘာလမှာ သင့်ကံကြမ္မာ ဘယ်လိုရှိမလဲ ?
စက်တင်ဘာလမှာ သင့်ကံကြမ္မာ ဘယ်လိုရှိမလဲ ? လူသားတိုင်းမှာ ကံဆိုးကံကောင်းတွေရှိတက်ကြစမြဲပါပဲ ကိုယ့်ကံကြမ္မာက ဘယ်အချိန်မှာဆိုးမယ် ကောင်းမယ်ဆိုတာ သိထားရရင် ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေမှုတွေရှိနိုင်တာမို့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ် တွက်ချက်ထားကြည့်ဖို့ အဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါနော် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် […]
သင့်ကို ရည်းစားဟောင်းတွေက ချစ်နေတုန်းလား ?
သင့်ကို ရည်းစားဟောင်းတွေက ချစ်နေတုန်းလား ? ရည်းစားဟောင်းတွေက သင့်ကို ချစ်နေကြတုန်းပဲလား ဒါမှမဟုတ် မုန်းသွားကြပြီဆိုတဲ့ သူတွေရော ရှိနေမလား သေချာတာတော့ ရည်းစားဟောင်းဆိုတာ ရည်းစားဟောင်းပါပဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကိုကျေနပ်အားရတယ်ဆိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ […]
သင့် အသဲကွဲဒဏ်ရာကို အမြန်ဆုံး ကုစားပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို သိနိုင်ပါပြီ
လူတိုင်း ချစ်ဖူးကြမှာပါ ချစ်ဖူးသူတိုင်းလည်း အသဲကွဲခြင်း နာကျင်ဝမ်းနည်းခြင်းတွေ ခံစားကြဖူးမှာပါနော် …။ ကြုံချင်ကြမှာတော့မဟုတ်ပေမယ့် ကြုံလာနိုင်တာမို့တကယ်လို့ သာ သင်က အသဲကွဲနာကျင်ခြင်း ဝေးနာကို ခံစားရမယ်ဆိုရင် သင့်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အသဲကွဲဒဏ်ကို ကုစားခြင်းအဖြေရှနနေပါါတယ် … ဘယ်လိုနည်းလမ်းလဲဆိုတာ အဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်ပါနော် … ။ […]
ရုပ်ချောသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဘာပြောချင်သလဲ ?
ရုပ်ချောသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဘာပြောချင်သလဲ ? လူတိုင်း ရုပ်မချောနိုင်ပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် အလှတရားကိုယ်စီတော့ ရှိတက်ကြပါတယ် ၊ သင်ကရော သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အချောဆုံး အလှဆုံးသူလား ဒီလိုဆိုရင် သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို သင့်အနေနဲ့ ဘာပြောချင်သလဲ အားပေးစကားလား ကြွားဝါပြောမယ့်စကားလား တစ်ခုခုပြောရမယ်ဆိုရင် သင်အပြောချင်ဆုံးစကားက ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ အဖြေရှာကြည့်ရအောင် […]
Ex က သင့်ကို ထည့်သွားတဲ့ အလှပဆုံး စကားလုံး
Ex က သင့်ကို ထည့်သွားတဲ့ အလှပဆုံး စကားလုံး လူတိုင်းမှာ Ex ရှိတက်ကြသလို Ex တိုင်းကလည်း ဂျင်းထည့်တဲ့ စကားလှလှလေးတွေ ပြောတက်ကြပါတယ်… သင့်မှာရော Ex ရှိပါသလား သင့် Ex ကရော သင့်ကို ဘယ်လို ဂျင်းထည့်သွားလဲ ဒါမှမဟုတ် သင်က […]